Babany C.﻿ il y a 1 année
Recueilli pa JRR il y a 1 année
Famokarana haricots verts nohatsaraina
Edmondine.H il y a 2 années
Faritra tena ratsy lalana ny Kaominina Ambanivohitra Vohimarina Lamosina. Any amin’ny 12Km andrefan’Andranovorivato no misy azy. Faritra mena ity Kaominina ity noho ny fanjakan’ny asan-dahalo. Miandahy miambavy ny malaso any. Tena mamokatra ihany koa anefa ka maro ny mpanangom-bokatra mitondra fiara vaventy tonga any.